Tirakoobka Minneapolis 2010ka: Waxay ku jirta gacmahenna
Ku soo dhawow magaladda Minneapolis Websitekeeda tirakoobka sanadka 2010ka.
Ujeedadeena waxay tahay in dadka degan Minneapolis in lala socodsiiyo lana baro faaidada ay leedahay tirakoobka dhicidoona sanadka 2010ka iyo warar badan oo la xiriira tirakoobka. Matalan, waxyaalaha muhiimka ah aan gaarnay waxa ka mid ah aasasida guddiga xisaabinta dhamaystiran oo qorsheye, iskuna dabarida sidii lagu gaarsiinlaha loona barilaha macluumaadka tirakoobka ka hore intusan dhicin sanadka soo socda 2010ka
Tirakoob sax ah ee ka dhaca magaaladda Minneapolis sanadka 2010ka waxay faaido u tahay mustaqbalka magaaladda. Macluumaadka tirakoobka waxa laga go’aansanaya sidii ugu yaraan $300 bilyan loogu qaybin laha 170 Mashaariic dawladda dhexe leedahay. Macluumaadka tirakoobka waxa kaloo laga go’aansanaaya baahida loo qabikaro hayadaha samafalka muhiim u ah bulshooyin badan. Waxa la qiyaasay in $ 1 milyan ay ka lumayso boqolkii qof oo aan la xissabin lana tirakoobin dadka degan Minneapolis tobanka sano ee soo socda. Waxa kaloo tirakoobka loo isticmaalaya inta kuraasta golaha kongresska dawlad Gobolaydka Minnesota helayso, Minnesota waxay ka mid tahay kuwa hal kursi golaha congresska lumindoonta hadii aan qof walba la xisaabin.
Sharciga aya dhigaaya in tirkakoobka la sameeyo. Macluumaadkasto oo lagu garan karo dadka tirakoobka ka jawaabay ama qoosaka waxay ahaandoonaan qarsooda ugu yaraan 72 sano. Xita madaxweynaha Maraykanka looma faxikaro macluumaadkaada gaarka ah.
Hadii aad wax suaal ka qabto tirakoobka ama jeclaan layd in aad ka qaybqaadato la shaqeynta si volunteer ah fadhlan waxaad u soo dirta e-mail Census2010-minneapolis@minneapolismn.gov.
Waxa kale aad la soo xiriirta Hannah Garcia: garci398@tc.umn.edu ama Jeff Schneider: Jeff.schneider@minneapolismn.gov